Fampandrosoana · Febroary, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Febroary, 2012
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Febroary, 2012
Amerika Latina 27 Febroary 2012
Afrika Mainty 12 Febroary 2012
Amerika Latina 07 Febroary 2012
Todo lo acordado con los indígenas ha sido cumplido. Ahora elementos foráneos desean que no haya hidroeléctricas. Eso hará triplicar la luz Notontosaina tsara izay nifanarahana tamin'ireo mponina teratany. Ankehitriny tsy mila herinaratra ny olona hafa ao an-tanàna. Hampitombo avo telo heny ny jiro fanazavana izany. Toy izany no fomba nanehoan'ny Filoha...